शिव कल्चरल एण्ड कम्युनिटी सेन्टर युकेको अध्यक्षमा भिम | BBM WORLD TV
लण्डन । शिव कल्चरल एण्ड कम्युनिटी सेन्टर युकेको अध्यक्षमा भिम बानियाँ चयन भएका छन् । उनी गत आइतबार ८ डिसेम्बरका दिन सम्पन्न कम्युनिटी सेन्टरको साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । सो नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा वाचस्पति रेग्मी, महासचिवमा बिक्रम भट्टराई, कोषाध्यक्षमा हरि भट्टराई, सहकोषाध्यक्षमा गंगा अधिकारी, साँस्कृतिक सचिवमा तानिया जैंन र शुसिला पौडेल चयन भएका छन् । त्यस्तै, शंकर श्रेष्ठ, दिल रुचेल, भरत श्रेष्ठ, अरविन्द साहनी, प्रदीप रेड्डी, भिमबहादुर गुरुङ, निरज तिवारी, निरज शर्मा, शरद कुल्कुर्नी सदस्यमा चयन भएका छन् । साथै, सो साधारणसभाले निवर्तमान अध्यक्ष रोहित गुरुलाई कम्युनिटी सेन्टरको संरक्षकमा चयन गरेको छ ।
त्यस्तै, साधारणसभाले अम्बर मल्ल, शेर सुनार, सुर्जे (रामचन्द्र) गुरुङ, भिम बानियाँ, जीव बेल्वासे, डा. रेजी, पुरन गिरी, निलकण्ठ पौडेल, हरि भट्टराई, बिर बिक्रम भट्टराई, बेम थापा, डा. कुमार अग्रवाल, सुष्मा गुरुङ, सुनित जैंन बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा चयन भएका छन् । साथै, १ जना ट्रष्टिज भने विभिन्न संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पछि चयन गरिने कम्युनिटी सेन्टरका महासचिव बिक्रम भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी तथा सदस्य र ट्रष्टीजहरुलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एकेन्द्र गुरुङले सपथग्रहण गराएका थिए । उक्त निर्वाचन समितिमा अनुप बर्मा र जीव बेल्वासे आयुक्त रहेका थिए । कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष भिम बानियाँले मन्दिरका कामहरुलाई निरन्तरता दिने, संस्थालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउने लगायतका वचनवद्धता व्यक्त गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिए ।
एनआरएनएयुके अध्यक्ष पुनम गुरुङ र शिव कल्चरल एण्ड कम्युनिटी सेन्टर युकेका अध्यक्ष रोहित कुमार गुरुङले पानसमा दिपप्रज्ज्वलन शुभारम्भ भएको कार्यक्रममा ग्रेटर रसमुर नेपाली कम्युनिटिका उपाध्यक्ष नेम थापा लगायतले साधारणसभा सफलताको शुभकामना दिदैं आपूmहरुले कम्युनिटी सेन्टरसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे । त्यस्तै, संरक्षक डा. बिनोद कुमारले सबैको साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
त्यस्तै, एनआरनए युकेका अध्यक्ष पुनम गुरुङले प्रमुख अतिथिको आशनबाट आपूmहरुको सहकार्य र सहयोग अनि सहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा महासचिव बिक्रम भट्टराईले वर्षभर गरिएका वैदिक कार्यक्रमका साथै मन्दिर खÞरीद देखी आन्तरिक निर्माणका गतिविधिहरुको सम्पूर्ण विवरण पेश गरेका थिए । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष वाचस्पति रेग्मीले संस्थाको आयव्यय प्रस्तुत् गर्दै संस्थाको नाममा करीब ६८ हजÞार पाउण्ड रहेको जानकारी गराएका थिए ।
करीब ८० जनाभन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको साधारणसभामा आगामी दिनहरुमा काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य अनुरुप सर्वसम्मतले विधानमा संसोधन गरिएको थियो ।
शिव कल्चरल एण्ड कम्युनिटी सेन्टर युकेको अध्यक्ष रोहित कुमार गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई महासचिव बिक्रम भट्टराईले संचालन गरेका थिए ।